Ogaden News Agency (ONA) – JOKA oo Ka Dhigay Pretoria Banaabax Balaadhan oo Lagaga Soo Horjeedo Xukuumadda Itobiya
JOKA oo Ka Dhigay Pretoria Banaabax Balaadhan oo Lagaga Soo Horjeedo Xukuumadda Itobiya
Waxaa maanta Bananbax lagu qabtay magaalada Pretoria halkas oo ah caasimda wadanka South Africa. Bananbaxa oo ahaa mid gilgilay wadooyinka magaalada ayaa waxaa ka soo qaybgalay dad kun gaadhaya oo isaga kale gobolo kala duwan. waxaa laga bilaabay socodka meel 10km u jirta Union Building oo ah Aqal madaxtooyada South Africa. Bananbaxa waxaaa wada diyaarinyay Jaaliyaddaha maatahana ah ee Ogaden iyo Oromo. Socodka oo aad u dheer wuxuu magaalada galay cidhiidh dhinaca isu socod halkaas oo polic-ka iyo Traffic-kada wadanku si wada jira ay xidhiyeen wadooyinka .
Ujeeda Bananbaxa oo aha in la muujiyo dhibaatada dowlada Ethiopia ku hayso shucubta ay gumaysato sida Somalida Ogaadeenya iyo Oromada . Waxaa dadku ku dhawaaqayeen samacado codkoodu aad u dheer yahay midkaas oo laga maqlayay xafadaha ku xeeran wdooyinka , oo dadka inta badan ay guryaha iyo goobaha ganacsiga kor ugu soo baxeeyeen si ay u arka una dhagayta codka dadka . dadka waxay ku qaylinayeen erayo kadhan ah taliska mucangaga ah ee Ethiopia haysta .
Dadka ka soo qayb galay mudaharadka waxay kale yimaadeen meelo kale duwan oo kafog caasimaada. Waxaa dadka lagu keenay Basas lagag soo dal dalay magaalooyinka Johanesburg iyo Pretoria iyadoo ay jireen dad badan oo wadatay baabuur gaar ah .
Mudahaaradka waxaa isugu yimid saxafada wadanka iyo mida dibada kuwaas oo dubayay habsocodka mudaharaadashayaa . dadka oo xamasadaysnaa awgeed , saxafiyiintu orod ayay ku duubanayeen .Mar aa wax ka waydiiyay nin saxafi ahaa oo mudaharaadka aan kula kulmay , wuxuu yidhi “ ma anan arag mudahaarad noocan oo kale ah “ .
Ugu danbeeytii , Mudaaharaadashayashii waxay gaadheen goobtii loogu talo galay midaas oo ahayd aqalka madaxtooyada ama looyaqaano Union Building halkaas oo mar hore ay jaaliayadda Ogaadenya kaligeed ku mudoharaaday 2007 . Waxa goobtaas yimid ninka socod xafiiska madaxweynaha Jacob Zuma . waxaan halkaas gacanta lagaga riday warqadii cabasha (memorandum Letter) midaas oo balan qaaday Mbleki in uu horgaynayo madaxweynaha wadanka .